IBay View Suite, iVoucherliagmeni - I-Airbnb
IBay View Suite, iVoucherliagmeni
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguPanos
Indawo ephangaleleyo esembindini weVoucherliagmeni. Uhamba nje imizuzu emibini ukuya kuzo zonke izinto ezenziwa ekuhlaleni kunye nezona ndawo zintle zokuphefumla kwiVouliagmeni Bay. Umgama wokuhamba ukusuka kuzo zonke iilwandle ezintle ezijikeleze iVoucherliagmeni kunye neLake iVouliagmeni kunye nemithombo yamanzi ashushu edumileyo kunye ne-spa yendalo.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle eliyi-22sm, elinendawo entle yokubuka ubuhle bendawo yethu evulekileyo nenendawo yokubuka ulwandle eyi-180 ukuya kwiVoucherliagmeni bay kunye neHotele yeAstir Palace edumileyo enamaxesha amane.
Ilungele isibini okanye umhambi ohamba yedwa. Ilungiswe ngo-2019, inegumbi lokuhlambela elisebenzayo elineshawa, ikhitshi elincinci elinokusetyenziswa ngokusisiseko - kodwa kungekhona ukupheka- i-50Mbps VDSL Wi-Fi, i-TV yesatellite, i-55'' Smart TV, iA/C entsha, itafile yokutyela ye-balcony enezitulo eziyi-2 kunye neendawo zokutyela ilanga zokugcwala ilanga.
55" HDTV ene-I-Chromecast, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Zonke iikhefi ezidumileyo, iivenkile zokutyela zeentlanzi, iivenkile zentsapho eziluhlaza, iivenkile ze-ice cream kunye nemarike zijikeleze le ndawo. Uwela esitratweni ukuze uqubhe okanye uhambe imizuzu eyi-12 ukuya eAstir Beach.
Le yiyo yodwa isitudiyo esiphezulu eluphahleni kuyo yonke le ngingqi, ngaphandle kwamathandabuzo ngaso!!
As a frequent traveler and a citizen of the world, all I need is to feel like a local wherever I find myself.
We will always be available to assist you and offer superior services for a mesmerising time in Greece.
My priority is always to offer exceptional locations that combi…
Siza kube sikhona ukuze sikubhalise xa ufika, emva koko siza kuhlala sifumaneka kuwe. Ukuba ufuna nawaphi na amacebiso, njl., thumela nje umyalezo okanye usifowunele :)
Inombolo yomthetho: 01032417833